Vanim-potoana sy ny fivoaran'ny UNIX
Ny UNIX dia rindrankajy mpandrindra (sokajy mpandrindra milina na operating system)ny milina fikajiana na mpikajy namboarin'ny orinasa AT&T Bell Labs. Ny UNIX no loharanon'ny mpandrindra milina rehetra amin'izao fotoana ary voafidy ho laharana voalohany amin'ny rindrankajy rehetra noforonin'ny olombelona hatramin'izao. Ny Linux, Windows, MacOS, sy ny mpandrindra milina hafa dia miankina amin'ny UNIX avokoa.
4 Ivelany rohy
5 Boky azo jerena
Ny software mpandrindra UNIX dia namboarina ho fampiasana amin'ny milina fikajiana lehibe (workstation na supercomputer). Ny milina fikajiana lehibe dia nampiasaina tamin'ny fikarohana nataon'ny orinasa lehibe maro. Ohatra, NASA amin'ny fanamboarana misiona mankany amin'ny satelita voajanahary volana, planety marsa sy ny fikajiana fanamboarana baomba atomika anaovana rokety-ny fiaramanidina mivaoka ny atimosifera tamin'ny taona 1960 ka hatramin'izao, General Electric amin'ny fandrindrana ny herin'aratra, AT&TBell Labs amin'ny fandrindrana ny telefonina sy ny fampitam-baovao. Ny oniversite koa dia nanana milina fikajiana lehibe ka afaka nanamboatra sy nanitatra ilay rindrankajy. Anisan'izany i MIT sy UC Berkeley izay samy manana ny marika UNIX-ny avy fantatra hoe Multics sy ny BSD (Berkeley Software Distribution).
Misy karazany maro ny UNIX ka anisan'ny malaza ny BSD, Solaris, Mac OS X, ary ny Linux. Misy ny entam-barotra ary misy koa ny azo ampiasaina maimaimpoana. Ny sary dia mampiseho ny karazany azo ampiasaina amin'izao fotoana izao ka misy sokajy maromaro eo ny sokajy BSD, sokajy System III&V), ary ny sokajy GNU project.
Ivelany rohy[hanova | hanova ny fango]
Boky azo jerena[hanova | hanova ny fango]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=UNIX&oldid=768553"
Voaova farany tamin'ny 30 Aprily 2015 amin'ny 14:28 ity pejy ity.